Ganacsi – Banaadir Times
Home Archive by category Ganacsi
By banaadir 1st June 2018 No comment
Dowladaha Djibouti iyo Soomaaliya ayaa kala saxiixday heshiis iskaashi oo ku qotoma dhinacyada gaadiidka Cirka iyo dhulka, sida ay sheegtay wakaaladda Wararka ee Djibouti. Wakaaladda Djibouti ayaa warkani baahisay maalin nimadii Arbacada aheyd oo Taariikhdu ku beegneed 2, May, 2018-ka, heshiiskan ayaa labada dowladood u ogolaanayo inay ka faa’ideystaan qadka duulimaadka
Kalluumeysatada ku sugan deegaanka Deenoood ee gobolka Mudug ayaa wajahaya dhibaatooyin dhanka Kalluumeysiga ah ka dib markii Maraakiib Jariif ah ay ka burburiyeen qalabkii ay ku kalluumeysanayeen. Duune Maxamed Aadan oo ka tirsan Kalluumeysatada deegaanka Deenood ayaa Goobjoog News uga warramay dhibaatooyinka heysta kalluumeysatada. “Kalluumeysatadii qalabkii waa ay ka
Bankiga Adduunka ayaa Puntland ka fulinaya mashruuc loogu magacdaray magaaleynta Puntland, kaasi oo lagu dhisayo waddooyin iyo Buundooyin. Xiriiriyaha mashruuca magaaleynta Puntland ee Bankiga adduunka Asad C/raxmaan Guure ayaa sheegay in mashruucan uu marxalado kala duwan uu soo maray, yahayna midkii ugu horreeyay ee Bankiga Adduunka ka fuliyo Soomaaliya. Guure ayaa
Dowladda Qatar ayaa mamnuucday in badeecadaha laga keeno dowladaha Sacuudiga, Imaaraadka, Baxreyn iyo Masar lagu iibiyo Suuqyada iyo goobaha ganacsi ee Qatar. Tallaabadan ayaa ah tii ugu horreysay oo Qatar ay qaado tan iyo markii ay go’doomiyeen qaar ka mid ah dowladaha Khaliijka. Wasaaradda Ganacsiga iyo Dhaqaalaha Qatar war-murtiyeed ay soo saartay ayaa ganacsatada